Ethereum Waa maxay iyo sida loo iibsado Ethers? Dhammaan wixii ku saabsan xannibaadda | Wararka Gadget
Michael Gaton | | Criptomonedas, Noticias, Tiknoolaji
Etherum ma aha beddel fudud oo Bitcoin lafteeda ah, laakiin waa madal ka faa'iideysata tiknoolajiyada xannibaadda (sidoo kale loo isticmaalo Seeraar) kaliya maahan inay bixiso qaab kale oo lacag bixin ah la mid ah Seeraar, Ether, laakiin waa barmaamij horumarineed oo softiweer ah oo gacan ka geysanaya abuurista nidaamyada loo yaqaan 'cryptocurrency system' ee wadaaga silsilado baloogyo ah, oo si fiican loogu yaqaanno xannibaadda, halkaasoo diiwaanada la geliyay aan wax laga beddeli karin ama aan wax laga beddeli karin wakhti kasta.
Laakiin haddii waxa xiisaynaya aad tahay inaad ogaato Haddii Ethereum uu baddal u yahay Bitcon, jawaabtu waa maya. Beddelka Bitcoin ee Ethereum na siiso waxaa loo yaqaan Ether, oo ah barxad marka laga reebo mashruuca Ethereum oo aan kuu sheegi doonno wax kasta oo hoose si aad u ogaato sida ay u shaqeyso iyo sida loo iibsado Ethereum.
Haddii aad rabto inaad iibsato Ethereum hadda, hel $ 10 BILAASH iibsigaaga adoo gujinaya halkan
1 Waa maxay Ethereum?
2 Waa maxay Ether?
3 Ayaa abuuray Ethereum?
4 Beddelka Bitcoin
5 Sidee loo iibsadaa Ethereum?
6 Waa maxay xannibaad?
7 Qandaraasyo caqli badan
8 Ma jiraa xumbo loo yaqaan 'cryptocurrency'?
Sida aan kor uga faallooday, Ethereum waa mashruuc isku daraya lacagta dijitaalka ah, Ether, sida Bitcoin, laakiin waxay ka faa'iideysataa fursadaha ay xannibaadda na siiso, rikoor aan la beddeli karin iyo in tan iyo dhalashadii Ethereum lagu hagaajiyay abuuritaanka qandaraasyo caqli badan. Qandaraasyada caqliga, guud ahaan, waxaa ka mid ah hawlgal maaliyadeed, waxay u dhaqmaan si hufan labada dhinacba iyo hawlgalkoodu wuxuu aad ugu eg yahay xeerarka barnaamijyada Hadday sidaas sameeyaan. Taasi waa, haddii ay taasi dhacdo, waa inaad tan kale samaysaa haa ama haa.
Hel $ 10 BILAASH iibsashada ETH adoo gujinaya halkan
Dhammaan macluumaadkaani waxay ka muuqdaan xannibaadda, rikoor aan la beddeli karin halkaas oo dhammaan hawlgallada ka muuqdaan, ha ahaato iibinta ama iibsiga lacagta qadaadiicda ah, qandaraasyada caqliga badan ... Macluumaadka ku kaydsan barxadda xannibaadda ayaa loo heli karaa qof walba waxaana laga heli karaa dhammaan kombuyuutarrada ka kooban shabakadda Ethereum. Hawlgalka Bitcoins xannibaadda ayaa ficil ahaan isku mid ah, laakiin kaliya macluumaadka macaamil ganacsi ayaa lagu duubay, maxaa yeelay fursadaha ay teknolojiyaddani bixiso lama ballaadhin.
Waa maxay Ether?
Barxadda Ethereum maahan lacag lafteeda. The Ether waa lacagta barxadda Ethereum, iyo taas oo aan dadka ugu samayn karno lacag wixii alaab ama adeeg ah. Ether waa mid kale oo ka mid ah lacagaha loo yaqaan 'cryptocurrencies' ee laga heli karo suuqa oo loo bilaabay inay la tartamaan Bitcoins, laakiin si ka duwan tan dambe, Ether waxaa lagu soo daray barxad si buuxda uga faa'iideysata xannibaadaha, oo loo yaqaan 'blockchain'.
Ether, sida Bitcoin oo kale aysan gacanta ku haynin hay'ad maaliyadeed, sidaa darteed qiimaheeda ama sheegashadiisu kuma xirna saamiyada, guryaha ama lacagaha. Qiimaha Ether waxaa lagu go'aamiyaa suuqa furan iyadoo loo eegayo howlaha iibsiga iyo iibinta ee waqtigaas jira, sidaas darteed qiimahiisa ayaa isbeddelaya waqtiga dhabta ah.
Waxaad rabtaa 10 $ bilaash ah markaad iibsato EtH-gaaga? Waa hagaag halkan guji
Halka tirada Bitcoins ay ku egtahay 21 milyan, Eterku ma xadidna, markaa qiimaheedu waa mid aad uga 10 jeer ka hooseeya Bitcoins. Intii lagu guda jiray iibkii ka hor intaan la bilaabin Ethereum, 72 milyan Ether ayaa loo sameeyay dhammaan isticmaaleyaasha ka qayb qaatay barnaamijka Kickstarter ee mashruuca iyo aasaaska Ethereum, oo, sida aan arki doonno, na siinaya waxyaabo kale oo aad muhiim noogu ah shaqooyin iyo qiimo leh. Marka loo eego shuruudaha la dejiyey intii lagu jiray iibinta kahor 2014, soo saarista Ether waxay ku egtahay 18 milyan sanadkii.
Ma rabtaa inaad maal gashato Ethereum?
Halkan guji si aad u iibsato Ether
Ayaa abuuray Ethereum?
Si ka duwan Bitcoins, abuuraha Ethereum wuxuu leeyahay magac hore iyo mid dambe mana qariyo. Vitalik Buterin wuxuu bilaabay horumarka Ethereum dhamaadkii 2014. Si loo maalgeliyo horumarinta mashruuca, Vitalik wuxuu raadsaday maalgelin dadweyne, iyadoo laga aruuriyay wax ka badan 18 milyan oo doolar. Ka hor inta uusan diirada saarin mashruuca Ethereum, Vitalik wuxuu wax ku qorayay baloogyo kala duwan oo ku saabsan Bitcoins, waxay ahayd markaa inuu bilaabay inuu horumariyo xulashooyinka ay teknolojiyadda adeegsata Bitcoin ay u soo bandhigi karto isaga iyo ilaa daqiiqadaas la khasaaray.
Waqtigan xaadirka ah suuqa waxaan ka heli karnaa tiro badan oo beddel ah Bitcoin-ga awoodda badan, laakiin markii waqtigu dhammaado, lambarkan si aad ah ayuu u yaraaday Cimraan, Litecoin iyo Ripple oo ah beddelka ay isticmaalayaashu adeegsadaan. Inta badan guusha ay Ether heysato, waxaa mahad leh mashruuca Ethereum oo dhan ee gadaal ka taagan, maadaama hadday kaliya beddeli lahayd, kuma guuleysan lahayn inay qabsato rubuc ka mid ah howlaha laga qabto adduunka oo dhan. cryptocurrencies, halkaas oo Bitcoin uu yahay boqor leh ku dhowaad 50% ganacsiyada.
Sidee loo iibsadaa Ethereum?
Marka xigta waan sharxi doonaa sida loo iibsado Ethereum Ama halkii, sida loo iibsado Ethers oo ah magaca loo yaqaan 'cryptocurrency'.
Ahaanshaha tartan toos ah oo ka socda Bitcoin, si aad awood ugu yeelatid inaad si buuxda ugu lug yeelato abuurista Ether waxaan u baahanahay kombiyuutar awood badan, isku xirka internetka iyo barnaamijka loo baahan yahay si aad u awoodo inaad ka mid noqotid shabakadda isku dhafan, oo markaa aad bilowdo inaad hesho noocan lacagta dijitaalka ah. Iyadoo la tixgelinayo in Bitcoin ay bilaabatay inay shaqeyso 2009, dalabka iyo fargeetooyinka kala duwan ee aan ka heli karno suuqa waxay ku shaqeynayaan awood buuxda, wax aanan ka dhihi karin Ethereum xilligan.
Waxaan sidoo kale dooran karnaa wadada degdega ah iyo iibso Ethereum si toos ah lacagtan iyada oo loo marayo adeegyada sida Coinbase, waa adeeg sidoo kale noo oggolaanaya inaan si badbaado leh u kaydinno waxyaabaha loo yaqaan 'cryptocurrencies'.
Waa maxay xannibaad?
Si loo sharaxo faa'iidooyinka ay Ethereum na siiso, waa inaan ka hadalnaa xannibaadda, borotokoolka loo isticmaalo in lagu maareeyo dhammaan diiwaanada iyo hawlgallada lala fulinayo Ether, isla maamuuska ay adeegsadaan Bitcoins laakiin ay siiyeen koronto aad u muhiim ah oo amni bixisa.
Blockchain waa diiwaan halkaas oo dhammaan macluumaadka la xiriira cryptocurrencies lagu kaydiyo. Cryptocurrency kasta wuxuu adeegsadaa diiwan ka duwan. Diiwaankan lama tafatiri karo ama wax laga beddeli karo wakhti kasta oo waliba waa u muuqataa dhammaan, si qof kasta uu u heli karo. Ka ilaalinta wax ka beddelka ay xannibaadda na siineyso waa wanaaggeeda ugu weyn tan iyo markii loo adeegsan karo abuurista Qandaraasyo Smart ah.
Qandaraasyo caqli badan
Thanks to Ethereum waxaad sameyn kartaa qandaraasyo taas haddii shuruudaha qoran la buuxiyo, waa la buuxin doonaa haddii ama haddii ay si otomaatig ah u noqdaan iyada oo aan qof saddexaad loo baahnayn inuu bixiyo go-ka-hor. Cunsurka qaboojiyaha ee xaaladaha la buuxinayo waxaa laga dooran karaa ilaha ay dejiyeen labada dhinac. Nidaamka bangiyada ayaa ka mid ah kuwa ugu xiisaha badan in ay awoodaan in ay qaataan heshiis noocan oo kale ah si otomaatig ah qandaraasyada dhigaalka iyo kuwa kaleba ula galaan macaamiisha, maadaama ay ka fogaan laheyd khaladaadka suurtagalka ah ee aadanaha marka lagu daro ogolaanshaha hawlgal iskiis ah
Ka soo qaad in aad haysato faylalka faylalka ee damaanad qaadka ah ee aad ku dejisay shuruudaha haddii qiimaha amniga qaarkood uu gaaro tirada X ay si toos ah u iibiyaan. Iyadoo qandaraas smart Ethereum qofna uma baahna inuu soo dhexgalo, Qofna maahan inuu ka warqabo qiimaha marwalba si uu ugu sii wado iibinta saamiyada markuu gaaro qiime cayiman.
In kasta oo wax waliba u muuqdaan oo ay aad u qurux badan yihiin, waa in maskaxda lagu hayaa in qandaraaska noocan ah aan wax laga beddeli karin, marka mar haddii lagu daro diiwaanka waa haddii aad kansali kartid haddii shuruud la dejiyey oo kuu oggolaaneysa. Sidoo kale qodobada heshiiska lama beddeli karo, maadaama sida aan faallo ka bixiyay xannibaadda ay tahay rikoodh aan wax laga beddeli karin ama aan wax laga beddeli karin wakhti kasta.
Ma jiraa xumbo loo yaqaan 'cryptocurrency'?
Sida nooc kasta oo hanti ah, cryptocurrencies waxay u nugul yihiin goobooyin sicirkooda sicirkoodu sifiican uga sareeyo qiimahooda dhabta ah. Marka laga hadlayo cryptocurrencies, ogaanshaha xumbada suuragalka ah waa hawl aad uga dhib badan noocyada kale ee hantida tan iyo markii waa wax aan macquul aheyn in la go'aamiyo qiimaha dhabta ah ee shay sida asalka u ah sida loo yaqaan 'cryptocurrency'. Qiimaha Eteriga waxaa xaddidaya sharciga bixinta iyo baahida, inta badan ee dadku iibsadaan Ethers, inbadan oo qiimahoodu kor u kaco iyo tan kale, taas oo sababi karta in sicirka ay hadda si xoog leh u saameeyaan mala-awaalayaasha iibiya iyo iibiya lacagaha loo yaqaan 'cryptocurrencies' oo kaliya ka fikiraya qiyaaso qiimaheeda. Faa'iidada ay Ether ka heysato Bitcoin ayaa ah in tiradooda aysan ku ekeyn 21 milyan oo unug laakiin in 18 milyan oo ether la sii daayo sanad walba taasoo gacan ka geysan doonta xakameynta sicir bararka qiimaha.
Xitaa sidaas oo ay tahay, way adag tahay in la ogaado haddii aan dhab ahaan wajahayno xumbo iyo in kale, maadaama khubarada qaarkood ay tixgelinayaan taas 5-10 sano gudahood qiimaha Eter-ka ayaa ka badnaan kara 100 jeer kan hadda jira taas oo tilmaamaysa inay wali leedahay safar sare oo sare ah.
Haddii Ethereum uu ku qanciyey oo aad rabto inaad ka mid noqoto cryptocurrency, halkan waxaad ka iibsan kartaa Ether. Miyaadan wali dhiiri gelin iibso Ethereum?
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » Tiknoolaji » Ethereum Waa maxay iyo sida loo iibsado Ethers?
Aad u wanaagsan,
Ethereum! Maxay tahay lacag aad u fiican, oo aan jeclahay kuwa aaminka ah ama saadaalin dheeri ah ee nidaamka deegaanka cryptocurrency
Waxaan horey u iibsaday ETH-yoga 🙂
Ku soo jawaab GuiaEthereum
Waxaan xiiseynayaa maalgashiga Ethereum. Waa imisa qadarka ugu yar ee maalgashi sidee baan ku soo ceshan karaa maalgashiga?
Salaan F. Villarreal
Jawaab Francisco Villarreal Guijo
Waxaan xiiseynayaa maalgashiga Ethereum. Waa maxay xaddiga ugu yar ee lagu iibsado ethereum iyo sida dib loogu soo celiyo maalgashiga.